Забур 26 CARS - Nnwom 26 AKCB
1Bu me bem, Awurade,
efisɛ, mabɔ bra a asɛm nni ho:
mede me ho too Awurade so
2Sɔ me hwɛ, Awurade,
hwehwɛ me koma ne mʼadwene mu.
3Wʼadɔe wɔ mʼanim daa
na mɛnantew wo nokware mu.
4Me ne nnaadaafo ntena
na me ne nyaatwomfo nso nni hwee yɛ.
5Mikyi nnebɔneyɛfo guabɔ
na mempɛ sɛ me ne amumɔyɛfo tena.
6Mehohoro me nsa wɔ bembu mu,
na mekɔ wʼafɔremuka ho ahyia, Awurade,
7na mepae mu ka wʼayeyi
na meka wʼanwonwade nyinaa.
8Mʼani gye ofi a wote mu ho, Awurade,
faako a wʼanuonyam wɔ no.
9Mfa me kra nka nnebɔneyɛfo de ho nkɔ,
ne me nkwa nka mogyapɛfo de ho,
10wɔn a amumɔyɛ nhyehyɛe wɔ wɔn nsam
na adanmude ayɛ wɔn nsa nifa ma.
11Nanso mebɔ ɔbra a ho tew;
hu me mmɔbɔ na gye me nkwa.
12Mʼanan sisi asase tamaa so;
na guabɔ kɛse ase na mɛkamfo Awurade.
AKCB : Nnwom 26